Big Dolls Dolls iibka Jaban
Iibso Naqshad Wanaagsan Jinsiga Doll ee ugu Fiican
Waxaan iibineynaa dhammaan noocyada caruusadaha waaweyn ee dabada. Mid kastaaba wuxuu leeyahay isku dhafkiisa iyo astaamo u gaar ah. Tusaale ahaan, isku-darka naasaha waaweyn iyo badhida waaweyn, isku-darka naasaha yaryar iyo dabada weyn, iwm, waxaad ka heli kartaa doll ku habboon dhadhankaaga halkan. Midabkooda maqaarka iyo dhererkooduba sidoo kale way kala duwan yihiin. Halkan waxaad kula kulmi kartaa shuruudahaaga gaarka ah.
145cm Caadiga ah B-cup Oleander Maqaarka Bezlya Dolls
163cm B-cup Begonia Christmas Maqaarka Caalamiga Bezlya Dolls
160cm madaxa silikoonka ah, B-koob hyacinth, oo lagu rinjiyeeyay maqaarka guud Bezlya Dolls
Hailey 145CM Dhexdhexaad Caato ah Naaso Yar TPE WM Dolls
Morgan 153CM Naasaha Waaweyn Naag Qurux Badan TPE WM Dolls